नेतृत्वको कार्यशैलीबाट कार्यकर्ता दुःखी र निराश छन् Canada Nepal
नेतृत्वको कार्यशैलीबाट कार्यकर्ता दुःखी र निराश छन्
पटक पटकको विभाजन र विखण्डनको क्रमलाई भंग गर्दै दुई पार्टीको एकीकरण पश्चात राप्रपामा फेरि आशा एवम् भरोसा पलाएको छ। एकीकरणले राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमानै अपेक्षा गरिएको छ ।सबै आशावादी छौँ, तर ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौं।
नेपालमा रहेका कृयाशील विभिन्न पार्टीहरुको बीचमा राप्रपा एउटा मात्र प्रमुख वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी पार्टी हो। जसको आधार स्तम्भ राष्ट्रियता, हिन्दुत्व र संवैधानिक राजतन्त्रसंग जोडिएको छ। नेतृत्व तह कमजोर हुदा संबैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र राष्ट्रवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ । हरेक निर्णय लिँदा यी बिषयहरूलाई मनन गर्न अनुरोध गर्दछु । पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्म तपाईंहरुले गरेका प्रतिबद्धता सम्झनुस त अनि सोच्नुस कति पटक पार्टी फुटाउनु भो र किन फुटाउनु भयो ? कति पटक कार्यकर्तालाई धोका दिनु भो ? पार्टी फुटाउन ती अवोध कार्यकर्ताहरूको के दोष थियो ? माथिल्लो तहका नेताज्युहरुले मात्र यो गर्नु भएको होइन र ? त्यति हुदा पनि कहिले पनि जनताले हामीलाई धोका दिएका छैनन् ।
एउटा दुईवटा मात्र होइन तीनवटा पार्टी हुँदासमेत जनताले हामीलाई शानदार मत दिएका छन। सम्झनुस् त ती दिनहरू, जब मतदाताहरु उज्यालो नहुँदै विभिन्न डर, त्रासका बाबजुद मतदान केन्द्रमा गएर हामीलाई मतदान गर्नुभो । सम्झनुस् त कति टाढा टाढाबाट खाली खुट्टा र खाली पेट भोकभोकै मतदान गर्ने ती मतदातालाई । कति विरामी थिए होलान्, कति आशोच बारेका थिए होलान्, कति सुत्केरी थिए होलान्, कति वृद्धवृद्धाहरु लठ्ठी टेकेर मतदान गरे होलान् । ती हामीलाई खसालेका मतहरु केवल हावादारी कागज मात्रै थिए ? के ती जनताले गरेका विश्वासका मतहरु केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि मात्र थिए ? गाउँ गाउँमा रहेका ती तमाम कार्यकर्ताहरुको अनुहारको पीडा सम्झनु भएको छ ?
हामीलाई मत दिँदा देशमा संवैधानिक राजसंस्था स्थापना होला, हिन्दुराज्य स्थापना होला, भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, विदेशमा ती ४० डिग्री गर्मीमा काम गर्ने युवाहरुले देशमै रोजगारी पाउलान् भन्ने होइन र ? यी उज्यालोको सपना बोक्दै मत हालेका मतदातालाई कति पटक निराश बनायौँ । यसको हिसाब कार्यकर्ता र मतदाताले कोसँग खोज्ने ? तपाईंहरुलाई विश्वास गरेर सत्तामा पुग्दा मतदाताहरुको आँखामा छचल्किएको खुशी केही दिनमै आशमै परिणत हुँदाको क्षण महशुस गर्नु भएको छ ? हाम्रो यात्रा भर्खर शुरु भएको छ । हामीले पार्टी एकीकरणको घोषणा मात्र गरेका छाँै, त्यो अझै अपुरो अधुरो र कमजोर छ ।
निराशा र अन्योलताको बादल अझै मडारी रहेको छ ।यस्तो सुन्दा आम कार्यकर्ता दुःखी र निराश छौँ । पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर लागेका साथीहरूको सपना पूरा गर्नुछ । यही अभियानमा लागे बापत जीवन उत्सर्ग गर्ने सहीदहरुको सपना पूरा गर्नु छ । यहि गतिले त्यो संभव छ त ? कतिले काटिनु पर्‍यो, कतिले गोली खानु पर्‍यो, कति अपांग भएका छन् भने यो विचार बोकेकै कारण कतिले समाजबाट वहिष्कृत हुनुपर्यो । चुनावमा लडेर हारेर श्रीमतीको फुली र बुलाकी मात्र होइन बारीको पाटा बेचेर ऋण तिर्नेहरुको कथा पनि सुन्नु भएकै होला । गन्तव्य टाढा छ, अगाडि धेरै कालाबादलहरु मडारिरहेका छन । भन्नुस् त अबको बाटो सहज छ त ? पार्टी एकता घोषणा गर्दैमा गन्तव्यमा पुग्यौं त ?
अब जोखिम छैन त ? कति गर्नु हुन्छ विवाद ? कहिले वरीयताको किचलो, कहिले सोफामा बसाइको किचलो, कहिले झण्डाको किचलो, कहिले चुनाव चिन्हको किचलो, कहिले भाषणमा को अघि र को पछिको किचलो । कहिल्यै सोच्नु भएको छ गरिब दुःखी जनताको पीडा ? जनताले कस्तो रुपान्तरणको आशा गर्ने ? जनताको अपेक्षा र हाम्रो कार्य सम्पादन बीचको दूरीले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्न सकिएन भने अब हामी उठ्न कठिन हुन्छ । सधै विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न । कार्यकर्तामा कुनै समस्या छैन नेताहरूको व्यवस्थापनमा मात्र समस्या छ ।
अब पनि झिना मसिना कुरामा अल्झेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भो भने इतिहासमा मात्र सिमित हुनु पर्नेछ । तपाईंहरूको विगतको योगदान सिमित र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र रहेछ भन्ने वुझ्नेछन् । आदरणिय नेताज्युहरु, विगतमा जे जति कमिकमजोरी भए पनि गाउँ गाउँमा, चोकचोकमा चिया पसलहरुमा विपक्षी कार्यकर्ताहरुसंग औँला ठड्याउँदै आँखामा आँखा जुधाउँदै कार्यकर्ताहरु तपाईंहरुकै पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । ती तमाम कार्यकर्ताहरूको शिर झुक्ने काम नगर्नु होला । अझै धेरैले आशा राखेका छन् । सहि नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि वढ्ने हो भने अझै जनताले ठुलो आशा राखेका छन् । नीति र सिद्धान्त मिले चुनाव चिन्ह र झण्डा गौण हो । अब पनि यो या त्यो बहानामा पार्टी एकीकरणलाई गन्तव्यसम्म पुराउन सक्नु भएन भने पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू सहेर बस्ने छैनन् । ईमान्दार कार्यकर्ताहरूले जुन सुकै कदम उठाउन बाध्य हुनेछन् ।
श्रावण १८, २०७७ आइतवार ०५:०७:०० बजे : प्रकाशित
पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, नेताहरुको संरक्षण गर्न संविधानमा जताततै छिद्राहरुको व्यवस्था
शारदाप्रसाद त्रिताल । हाम्रा नेताले आफ्ना लागि धेरै गरेका छन् । हाम्रा नेताहरुले २०४८ सालदेखिको अनुभवका आधारमा बहुत विचार गरेरै नयाँ संविधान निर्माण गरेका रहेछन् । संविधानमा जताततै छिद्रहरु राखेर नेताहरुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पो गरिएको रहेछ ।
१ प्रधानमन्त्रीमा धेरै समय टिक्न पाइयोस् भनेर संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत संसदले चाहेका बखत प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्ने व्यवस्था गरेका रहेछन् । भन्ने वेलामा स्थिरताका लागि भनेर सबैलाई लोप्पा खुवाएकै हुन् ।
२ सांसदको जागिर ५ वर्षमा नघटोस् भनेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नराखेको रहेछ । भन्ने वेलामा प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्यो भने संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ भने ।वास्तवमा यी दुबै व्यवस्था सांसद हुने र प्रधानमन्त्री हुनेवालाहरुको मिलोमतोमा भएको रहेछ ।
३ लोकमान सिं कार्कीलाई सबै दल मिलेर सिफारिस गरेर प्रमुख आयुक्त बनाए र उहाँकै हाउगुजी देखाएर समानान्तर सरकार चलाउन दिनु हुँदेन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरे । यो लोकमानलाई देखाएर भ्रष्टाचारको आरोपबाट आफ्नै सुरक्षा पो गरिएको रहेछ ।
४ राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सीटको व्यवस्था राष्ट्रपतिको सम्मान र विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति गराउन होइन रहेछ सत्ता समीकरणमा लेनदेन मिलाउन निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेकाहरुलाई थन्क्याउने व्यवस्था पो गरिएको रहेछ ।
५ यस्ता कुरामा नेताहरुले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका रहेछन् र पो संविधान सभाबाट निर्माण गर्ने संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि पूरा नगरी संविधान जारी गरेका रहेछन् ।
६ संविधान जारी गर्ने वेलामा भारतको हस्तक्षेप देखाएर छिटो छिटो संविधान किन जारी गरे भनेको त यस्ता छिद्रहरु जनताले केलाउलान् र वित्यास पर्ला भनेर पो रहेछ ।
(लेखक शारदाप्रसाद त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
भाद्र २१, २०७७ आइतवार १५:१४:१७ बजे : प्रकाशित